Halkee ku dambeeyay Muuse Biixi iyo Shacabka Somaliland oo Baafinaya | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Halkee ku dambeeyay Muuse Biixi iyo Shacabka Somaliland oo Baafinaya
Nairobi ( Kalshaale ) Wefdi uu hogaaminayo Madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo maalmihii udambeysay ku sugnaa magaalada Abu Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta ayaa laga warhaynin meel ay ku dambeeyeen.
Shacabka Somaliland ayaa is-weydiinaya su’aalo dhowr ah oo la xidhiidha wefdiga Biixi iyo howlaha mashquuliyey.
Wefdigan ayaa waxa dadweynaha reer Somaliland ugu dambeysay 9-kii bishan oo Caasimada dalka Imaaraadka lagu soo dhaweeyay.
Waxaa la Waysan yahay Heshiiskii Rasmiga ahaa ee ay wada galeen Somaliland iyo Shirkadda Dpworld, Iyadoo Madaxweyne Biixi uu dalbanayo heshiiska rasmiga ah oo aan gacanta ugu jirin.
Wakiilka Somaliland ee Imaaraadka Carabta ayaa Qoraal kooban oo uu soo saaray waxa uu ku sheegay in Madaxweyne Biixi uu la kulmay madax kamid ah Imaaraadka, inkasta oo uusan dadka la wadaagin Magacyada masuuliyiinta uu Biixi la kulmay.
Dhanka kale dhaxal sugaha Imaaraatka ayaa ka cudur daartay inuu la kulmo Madaxweyne Biixi, Iyadoona intii uu Imaaraadka Joogay uu Madaxwayne Muuse Biixi ku galay baadhis caafimaad, Waxaana la filayaa inuu Hada dib igu soo Noqdo magaalada Hargeisa.
Muuse Biixi ayaa ugu dambayn maanta laga soo Sagootiyey Imaaraadka Carabta Isagoo kusoo Wajahan magaalada Hargeisa.
waar anna waxa an baafinayaa mw farmaajo sidii u yugandh utagay jan iyo cirib mayl udhigay lamahayo
waar bala labada mw weyne hala baadidono ma,afduubbaa mise waa sikale